आइपीएलमा दिल्ली राजस्थानसँग भिड्दै, सन्दीप खेल्न पाउलान ? - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलमा दिल्ली राजस्थानसँग भिड्दै, सन्दीप खेल्न पाउलान ?
काठमाडौं, चैत्र २८ । आइपीएलको ११ औं संस्करणमा दिल्ली डेयरडेभिल्स आफ्नो दोस्रो खेलमा आज राजस्थान रोयल्ससँग भिड्दै छ । दिल्लीको पहिलो खेलमा खेल्न नपाएका नेपालका युवा खेलाडी सन्दीप लामिछाने आज भने प्लेइङ ११ मा पर्ने सम्भावना बलियो छ ।
जितपुरस्थित सवाई मनसिंह रंगशालामा नेपाली समयअनुसार राति ८.१५ बजे खेल शुरु हुने छ । दुबै टिमले पहिलो खेलमा पराजय भोगेका छन् । किंग्स इलाभेन पञ्जाबसँग ६ विकेटले दिल्ली पराजित भएको थियो । साथै राजस्थान सनराइजर्स हैदराबादसँग ९ विकेटले पराजित भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस ‘इपीएल खेल्न आतुर छु’
ग्लेन म्याक्श्वेल, क्रिस मोरिस, ड्यानियल क्रिस्टेयन, सन्दीप लामिछाने, जासन रोय, ट्रेन्ट बोल्ट, कोलिन मुनरो र लिआम प्लुंकेट गरी दिल्लीमा ८ जना विदेशी खेलाडी छन् । यी मध्ये ४ खेलाडीले आजको खेल खेल्न पाउनेछन् ।
यु–१९ विश्वकप ह्याट्रिक विकेट तथा आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टु को प्लेयर अफ द सिरिज समेत भएका सन्दीप नेपालका प्रतिभाशाली खेलाडी हुन् ।
याे पनि पढ्नुस बिग बास लिगः आठौं जितको खोजीमा सन्दीपआवद्ध मेलबर्न
ट्याग्स: IPL, दिल्ली, सन्दीप लामिछाने